Zimbabwe fight club — AP Images Spotlight
In this Feb. 12, 2017 photo, a young boy nose bleeds after taking a few punches in a boxing ring in Chitungwiza, ZImbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 11, 2017 photo, a referee gives children instructions before they fight, in a boxing ring in Chitungwiza. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 11, 2017 photo, children fight in a boxing ring in Chitungwiza, Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Saturday, Feb. 12, 2017 photo, a young boy is knocked out during a boxing match in Chitungwiza, Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 11, 2017 photo, a referee invites young boys into the boxing ring in Chitungwiza, Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 11, 2017 photo, a young boy rests on the ropes after a boxing fight in Chitungwiza, Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 11, 2017 photo a young boy prepares to fight in Chitungwiza, Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Saturday, Feb. 12, 2017 photo, children prepare a boxing ring in Chitungwiza, ZImbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Saturday, Feb. 12, 2017 photo, organisers set up a boxing ring in Chitungwiza, Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Feb. 12, 2017 photo, a young boy is restrained by a referee during a boxing match in Chitungwiza about 30 kilometres south east of Harare. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 18, 2017 photo, children follow a boxing match in Chitungwiza about 30 kilometres south east of Harare. i(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Text from the AP news story, In Zimbabwe, boys are offered boxing instead of despair, by Farai Mutsaka.